Caasha: "Maacquul maaha in u keli qorshaayey falkan" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Aaskii Axmed Xasan oo lagu dilay Trollhättan. Sawirle: Muna Ismail/SR
Caasha: "Maacquul maaha in u keli qorshaayey falkan"
La daabacay torsdag 10 mars 2016 kl 13.13
Baadhitaankii ku saabsana falkii argagaxisnimo ee ka dhacay iskuulka Kronan ee magaalada trollhättan, halku argagaxiye Anton Lundin Pettersson saddex qof ku dilaay ayaa la goaamiyay shalay in hoos loo dhigo.
Caasha oo ah hooyo u ah gabadh Lundin Pettersson ka baxsatay markey aragtay in u sito seef dheer, ayaa ka shakeeynaysa dareenkeedi markey ay akhriday warka in baadhitaanka hor loo wadi doonin.
Baadhitaankan oo maanta la shaaciyay ayaa sheegaya in u ninka dilkan geystay keli ahaa, dad kale na ka dambeeyn ayuu u jeeda Sten- Rune Timmersjö oo baadhitaankan hogaamiyay, kana dambeeyay go´aanka in hoos loo dhigo.
Hasayeeshe Caasha ayaan fikirkan la qeeybsaneyn Timmersjö, madama ay macquul iyada la ahin in u ninkani keli qorshaayey falkan.
Sido kale waxaa baadhitaankan ka caddaatay in u Lundin- Pettersson ahaa nin xiiso u qaba dagaalkii labaad ee aduunka iyo fikirka faashistiga ah.
Islamarkaas ayaa baadhitaankan laga ogaaday in u ninkani maskaxda ka bukin.
Lundin- Pettersson ayaa inta aanu falkan sameeyn qoray warqad, halkaas oo boolisku ka akhriyay naceeybku ninkani u hayo dadka ajaanibta ah. Sidaas daraadeed ayuu boolisku falkan cinwaan uga dhigay mid salka ku haya asal naceeyb.